Hiil - Waayaha dadka la hayb-sooco
Ponte Invisibile, Pisa, 2010
ISBN: 88-88934-15-4 -
Waa buuggii saddexaad ee taxanaha Curisyo. Waxa uu Xasan Cabdi Madar kaga hadlayaa waayaha, dhibaatada iyo jiritaanka ummadda la haybsooco ee qabiil lagu haybsooco ee ku dhex nool bulshadeenna.
Akhriste - 2012-02-08 01:08:55
s/c? salaan kabacdi dhamantiin wad mahadsantiin idinka iyo qoraayaduba waxan yaro xiisan laha in lay tilmaamo meel an ka heli karo qoraa :xasan madar buugag tiisa ayaan rabi lahaa mahad sanidiin
Akhriste - 2011-05-23 01:53:42
cabdixakiin maxamed cabdi - inagujis_5@hotmail.com
runtii aad ayaan u akhriyay buuga. waxaanan aadu mahad celinaya qoraaga qoray buugan oo aan odhan karo wax ay umadeenu xumaan u aragto ayuu dhabarka u ritay. waxa uu buugani igu dhaliyay in aan dadkan la xidido si kasta oo ay ahaato. lkn waxaan qoraaga doonayaa in aan waydiiyo hadii inan lagaa siiyo beeshan sharafta leh sideed u aragtaa?
Akhriste - 2011-04-17 12:48:39
Jamal - Jamalyare21@hotmail.com
Waad mahadsantihiin walaale inta kadib waan sodaweyna